SingForYou.net - alwaysonglover's Channel
alwaysonglover 's Channel
Last Login: 01-26-2013 09:56
သီချင်းတွေဆိုနေ၇၇င်အ၇ာအားလုံးကိုမေ့တယ် ဖြစ်ချင်တာအဆိုတော်ဒါပေမယ့် ဖြစ်မလာခဲ့ ပါဘူး။ကျောင်းပွဲတိုင်းလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ ပြန်ပါဘူး။ဝါသနာကိုမတားနိုင်လို့ 1997 တုန်းက မြန်မာပြည်ဆို/ပျော် မှာဆိုလိုက်မိတယ်။ကံကောင်း၇င်အဆိုတော်ဖြစ်မလားလို့ ပေါ့လေ။ကံဆိုးစွာနဲ့ ဆိုခါနီးနေမကောင်းလို့ ဆုနဲ့ အလွဲကြီးလွဲခဲ့ ၇တယ်။ဒါပေမယ့်ကျောင်းပွဲတိုင်းမှာ ဝင်ပဲာခဲ့တာပေါ့။ဲအိမ်မှာလဲညီအစ်မတွေလုဆိုလိုကြိုးပြတ် နေတဲ့မိုက်တွေကသနားစ၇ာလေးတွေလေ။အဲ့ဒီလောက်အထိရူးသွပ်ခဲ့၇သူပါ။ အပီား -----ဒီလောက်ဆိုဝါသနာတူတွေအကြောင်းသိလောက်ပါပြီ။ အားပေးဦးနော် 3ပုဒ်100US$
Movies & Shows funny movie. nay toe so akone kyi tal.
Music အကုန်ကြိုက်တယ်. သီချင်းမရွေးဘူး
Books ဘေဘီလုံမှအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုး)
MyuKhoe on Jan 16, 2011
သြော.. တကယ့်အဆိုဝါသနာရှင်ကြီးပါလား.... ၃ပုဒ်ကို ဒေါ်လာတစ်ရာဆိုတော့ ဆယ်ပုဒ်နားထောင်သွားပါတယ်.. လိုချင်ရင်တော့ အိမ်ထိသာလာတောင်းပါတော့..
elvis on Jan 5, 2011
အသံက she နဲ့သလိုလိုပဲနော်..ဟီး.. လာရောက်နားသော်တာဆင်သွားပါတယ်။
4eva5exy on Oct 2, 2010
war tha nar tuu tway moe friend req lay send lite par tal sis..arr pay tal...lote thar lote..hehez
MH on Mar 6, 2010
အိမ်လာလည်တယ်ဗျ ... ကော်ဖီတိုက်ပါဦး ။
u4gyi on Feb 19, 2010
Sis ALS yay..you have so kool n so nice vocal... ber.. de lo bel.. song so del ko crazy fyit der .. lu tineanelamyar kwar twar der pop.. si9s yay.. set pe SFY mhar songs myar2so ber .. ar pay nay ber del..
maung309 on Feb 13, 2010
Lar lal thwar dal nor.. You haveavery nice, clear and attractive vocal. You also haveavery nice and skillful singing style. These two qualities are rare forasinger to have but you are blessed with both. All you need is practice.. practice.. practice. Listen to your records and look for minor mistakes such as timing (a little early or late in every verse), rooms to improve (athan swel taralittle too long or too short etc). If you pay attention to details.. I think you haveagreat future. (I know these stuff but I can't practise what I know that's why I do not sing well... lol)
alwaysonglover's Featured Recording
Song Title : Amyel Tann Minn Shi Tal
Views: 2679 Duration :03:30
Yoe Tharr Chin Tal
Views: 785 Duration :04:05
Toe Tate Tann Ta
Views: 759 Duration :03:51
Apyit Ma Myin
Views: 721 Duration :04:29
Tain Lo Achit
Views: 683 Duration :03:42
Views: 674 Duration :03:32
Views: 637 Duration :04:04
Views: 623 Duration :04:51
Ta Sa Si Kyo Pae Nay Tal
Views: 597 Duration :04:57
Kha Nha Kha Nha
Views: 574 Duration :02:55
ဒီလိုအချိန် Chinese New Year...
Views: 567 Duration :03:22
View All Recordings of alwaysonglover